Niova ny fividianana B2B - ny mpividy ankehitriny tsy fantatra anarana, mizarazara ary mahatohitra. Ny ezaka varotra B2B sy ny varotra dia mitohy miha tsy dia mahomby intsony satria ny ekipa mpamatsy vola dia miady amin'ny fisintomana tsy mitsaha-mitombo avy amin'ny mpanjifa sy ny vinavina ao anaty tontolo efa be olona sy be tabataba. Mba hifaninana sy handresena anio, ny ekipa mpanahan'ny B2B dia mila manova ny fomba fanaony handraisana ny fitakian'ny mpividy B2B maoderina. Ao amin'ny tontolon'ny fividianana B2B ankehitriny, ny mpividy dia: Anonyme - In
Snowflake dia mamaritra ny fomba nanovan'izy ireo ny varotra nataony tamin'ny marketing amin'ny kaonty #CONEX
Alatsinainy, Aogositra 20, 2018 Talata, Aogositra 21, 2018 Douglas Karr
Tonga tany Toronto aho nanatrika ny fihaonambe Uberflip's Content Experience. Androany, mandany ny andro ao amin'ny foiben'ny tsara tarehy Uberflip izahay ary mihaino mpandahateny mahatalanjona sasany. Fotoana iray nisy fiatraikany tamiko dia ny talen'ny ABM an'i Snowflake, Daniel G. Day, niresaka ny fomba namelabelarany programa ABM izay nampirongatra ny valin'ny varotra Snowflake. Miroborobo ny fizarana fihenan'ny @uberfliphq ho an'ny #CONEX! HQ tsara tarehy eto #Toronto #torontotech Lahatsoratra iray nozarain'i Douglas Karr (@Dknewmedia)